အကျိတ်တွေကြီးထွားမှုကိုနှေးကွေးပြဟော်မုန်းအဖြစ်ရင်သားကင်ဆာမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်း - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အကျိတ်တွေကြီးထွားမှုကိုနှေးကွေးပြဟော်မုန်းအဖြစ်ရင်သားကင်ဆာမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်း” Ian ကနမူနာသိပ္ပံအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 8th ဇူလိုင်လအပေါ်များအတွက် 2015 17.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါလတ်ဆတ်သောမျှော်လင့်ချက်ဟော်မုန်းတွေ့ရှိခဲ့သောတိရိစ္ဆာန်များအတွက်သုတေသနလုပ်ငန်းမှပေါ်ထွက်လာ, ချို့ယွင်းသော, ကနဲ့ပေါင်းစပ်သောအခါရင်သားကင်ဆာကင်ဆာကြီးထွားမှုနှေးကွေး ဆေး Tamoxifen, စံမူးယစ် treament.
နီးပါးရှိ 1.7 သန်းအမျိုးသမီးများ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်နှစ်စဉ်ရင်သားကင်ဆာရောဂါနေကြတယ်, တွေ့ရှိချက်များကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်အတည်ပြုကြသည်လျှင်ထက်ဝက်ခန့်ချို့ယွင်းသောကုထုံးကနေအကျိုးခံစားရဖို့မတ်တပ်ရပ်နိုင်.
တယောက်တည်း UK ရှိ, အကွောငျး 25,000 အမြိုးသမီးမြားမှာတစ်နှစ်အသစ်ကုထုံးတုံ့ပြန်နိုင်ကြောင်းရင်သားကင်ဆာအကျိတ်များ, သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်.
Related: ရင်သားကင်ဆာ '' သူ့ရဲ့အပုဒ်ထဲမှာရပ်တန့်နိုင်’ အသစ် technique ကိုအားဖြင့်, သိပ္ပံပညာရှင်များဆိုရ
"ဒီရလဒ်တွေကိုတော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်အလားအလာရင်သားကင်ဆာနှင့်အတူများစွာသောမိန်းမအဘို့အတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ,"ဟုပြောသည် ဂျေဆန်ကာရိုး, သူကကင်ဆာသုတေသနဗြိတိန်နိုင်ငံကင်းဘရစ် Research Institute မှမှာလေ့လာမှုပူးတွဲဦးဆောင်.
ဆရာဝန်များကရင်သားကင်ဆာအတွက်အချို့သောမော်လီကျူး၏အဆင့်ဆင့်ကင်ဆာကုသမှုကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိသည်သောအချို့သောအချိန်များအတွက်လူသိများကြပါပြီ, ရှင်သန်မှုနှင့်လူနာရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို. အဘယ်သူ၏မြင်းသရိုက်အနာအီစရိုဂျင် receptor ၏မြင့်မားသောအဆင့်ရှိအမြိုးသမီးမြား, ဥပမာအားဖြင့်, ထိုအီစရိုဂျင်ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုပိတ်ဆို့ကမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေအကျိုးကျေးဇူး. သူတို့ဆဲလ်အချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းအပေါ်တစ်ဦးဘရိတ်ထားနှင့်အကျိတ်ကြီးထွားမှုကိုအီစထိုဂျင်ကမောင်းနှင်ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလုပ်လုပ်.
သို့သော်အခြားမော်လီကျူး, ထိုအဓိကချို့ယွင်းအဲဒီ receptor, လည်းအရေးကြီးပါတယ်. အဘယ်သူ၏ရင်သားကင်ဆာ "နှစ်ဆအပြုသဘော" များမှာအမျိုးသမီးများ, သို့မဟုတ်အီစရိုဂျင်နှင့်အဓိကချို့ယွင်းနှစ်ဦးစလုံး receptors ၏မြင့်မားသောအဆင့်ရှိ, အကောင်းဆုံးအရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှုန်းထားများများ. အခုချိန်အထိ, အမည်မသိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်း.
ကဦးဆောင်အခြားအသင်းနှင့်အလုပ်လုပ် အက်ဒလိတ်မြို့တက္ကသိုလ်မှဝိန်း Tilley, ကာရိုးရဲ့အုပ်စုလူ့ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်များအပေါ်နှင့်လူ့ရင်သားကင်ဆာအကျိတ်နှင့်အတူထဲထညျ့ကြွက်တွေအပေါ်စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုစီးရီးဖျော်ဖြေ. သူတို့ကအဓိကချို့ယွင်းထည့်သွင်းအပြုသဘောကင်ဆာနှစ်ဆမှတွေ့ရှိခဲ့, ဆေး Tamoxifen နှင့်အတူ, ပိုပြီးတယောက်တည်းမူးယစ်ဆေးထက်သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုနှေးကွေး.
ဒါဟာအဓိကချို့ယွင်းကင်ဆာဆဲလ်တွေအတွက်အဓိကချို့ယွင်းအဲဒီ receptor ကပ်လျက်အခါထွက်လှည့်, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဂျင် receptor အကျင့်ကိုကျင့်ပွောငျးလဲ, ထိထိရောက်ရောက်အကျိတ်ကြီးထွားမှုကိုအပေါ်တစ်ဦးဒုတိယဘရိတ်တတ်၏. စမ်းသပ်မှုများချို့ယွင်းသောနှင့်ဆေး Tamoxifen ပေးသောကြွက်နို့စို့မြင်းသရိုက်အနာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်မူးယစ်အပ်ပေးတော်မူသောသူတို့ကို၏ထက်ဝက်သာအရွယ်အစားခဲ့ကွောငျးဖျောပွသ.
"အရေးကြီးတာက, ကအီစရိုဂျင် receptor ပစ်မှတ်ထားကြောင်းမူးယစ်ဆေးဖို့အဓိကချို့ယွင်းဖြည့်စွက်၏အလားအလာအကျိုးရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအဘို့ခိုင်ခံ့သောအမှုကိုပေးစွမ်းသည်, ဟော်မုန်းမောင်းနှင်ရင်သားကင်ဆာအများစုအတွက်ကုသမှုတိုးတက်စေနိုင်တဲ့အရာ,"ကာရိုးကဆက်ပြောသည်. လေ့လာမှု၏အသေးစိတ်အစီရင်ခံကြသည် သဘာဝ.
ဆေး Tamoxifen သူတို့မြင်းသရိုက်အနာကိုဖယ်ရှားရန်ခွဲစိတ်ခဲ့ကြပြီးနောက်နှင့်အီစထိုဂျင်ပစ်မှတ်ထားသောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများများသောအားဖြင့်ရင်သားကင်ဆာဝေဒနာရှင်အားပေးကြသည်. ကင်ဆာသုတေသနဗြိတိန်မှာအမ်မာစမစ်, သောလေ့လာမှုငွေကြေးထောက်ပံ့, အကယ်. ချို့ယွင်းသောလူ့စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့တွေ့သောကပြောပါတယ်, ဟော်မုန်းအထူးသဖြင့်အဘယ်သူ၏မြင်းသရိုက်အနာစံဆေးဝါးများကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်လာကြပါပြီမိန်းမတို့ကိုမနိုင်.
"ဆဲလ်တွေထဲမှာဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာလေ့လာမှုကိုဘယ်လိုတစ်ဦးစျေးပေါပြသထားတယ်, လုံခွုံသော, နှင့်ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်မူးယစ်အလားအလာအားလုံးရင်သားကင်ဆာလူနာတစ်ဝှမ်းထက်ဝက်အဘို့ကုသမှုတိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့,"ဟုသူမကဆိုသည်. "သုတေသနကျေးဇူးတင်ပါသည်, နီးပါး 70% အမြိုးသမီးမြား၏ယခုထက်ကျော်လွန်ရင်သားကင်ဆာရှင်သန် 20 နှစ်ပေါင်း, ဒါပေမဲ့ဒါအများကြီးပိုပြုရပါမည်ငါတို့သည်ရောဂါပုံစံအားလုံးကိုအဘို့အကုသရှာတွေ့သည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ရပ်တန့်မည်မဟုတ်။ "
32457	1 အပိုဒ်, ရင်သားကင်ဆာ, ကင်ဆာ, ကျန်းမာခြင်း, မှ Ian နမူနာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနများ, သတင်း, သိပ္ပံ, Society က
← 20 အကောင်းဆုံးအသစ် iPhone နှင့် iPad app များကိုနှင့်ဂိမ်းများယခုအပတ် Windows ကို 10: ပိုပြီး Microsoft က apps တွေကို Android နဲ့ iPhone မှလာကြ၏ →